Rehefa manoratra ny tantaran'ny fiainanao dia aza avela hisy olona hitana ny penina. - Harley Davidson - Quotes Pedia
Ny fiainana sarobidy. Zava-dehibe ny hampiasantsika azy tsirairay. Isan'ny fiakarana, tokony ho tsaroantsika fa tsy hamoy ny fiainantsika mihitsy isika. Tena ilaina ny hahatsapantsika ny tanjontsika sy ny filantsika. Zava-dehibe ny hiaina ary hisokatra amin'ny fanandramana zavatra vaovao mba hahafahantsika mamantatra tsara ny filantsika sy ny hanofisantsika ny nofinay.
Hisy ny fanamby eny an-dalana, saingy tokony hotadidintsika fa mila manatanteraka ny nofinofintsika isika. Hitondra fiainana mahafa-po izany ary hiantoka fa miaina fiainana mahasoa.
Hisy olona samy hafa izay hihetsika ho antsika. Saingy tsy tokony avelantsika hiova fo izany fitaomana izany ho fanomezana azy ireo ny fahefana hitarika ny fiainantsika. Mety hihevitra ianao fa ny olon-kafa no tadiavinao tsara kokoa. Mety ho marina koa io. Ny famoizana ny fifehezana ny fiainanao kosa mahatonga anao hanao zavatra araka ny fanaon'ny olon-kafa azy.
Very amin'ny maha-ianao anao sy ny fahafahanao miady ho an'ny tenanao ianao. Miankina sy mahatsiaro very ianao rehefa irery. Noho izany dia zava-dehibe ny fananana ny hafa ho aingam-panahy, saingy mahafehy tanteraka ny tenantsika.
Eo an-tananao ny penina hanoratanao ny tantaram-piainanao ary azonao omena azy mitokana izy io. Mety hanao fahadisoana ianao, nefa tsy hahatsiaro tena ho meloka noho ny tsy miankina amin'ny tenanao satria nataonao irery ny nataonao. Hianatra avy amin'izany ianao ary mandroso ary manenjika fahombiazana, izy rehetra dia olona mizaka tena.
Fanamarihana fanoratana aingam-panahy
Eritreritra tsara momba ny fiainana
Teny momba ny famakiana sy ny fanoratana
Tantara momba ny fiainana